မြန်မာနဲ့ မလေးရှားတို့ အပြိုင်လုကြမယ့် ၂၀၁၈ အာဆီယံယူ -၁၉ ချန်ပီယံရှစ်ဆုဖလား
မြန်မာဘောလုံးပရိသတ်တွေရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုအတွက် အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ပြရမယ့် ယူ-၁၉ အသင်း
14 Jul 2018 . 2:10 PM
အာဆီယံယူ-၁၉ ပြိုင်ပွဲကို ၂၀၀၂ ခုနှစ်က စတင်ကျင်းပခဲ့ပြီး ၂၀၀၄ ခုနှစ်က လွဲလို့ နှစ်စဉ်မပြတ် ကျင်းပခဲ့တဲ့ အာဆီယံဒေသတွင်း သက်တမ်းအလိုက် လူငယ်ပြိုင်ပွဲတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျင်းပပြီးစီးခဲ့တဲ့ (၁၅)ကြိမ်မှာ ဒေသတွင်းထိပ်သီး ထိုင်းအသင်းက ချန်ပီယံဆုကို (၅)ကြိမ်အထိ ရယူနိုင်ခဲ့ပြီး ပြိုင်ပွဲရဲ့ အအောင်မြင်ဆုံးအသင်းအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်းအသင်းရဲ့ နောက်မှာတော့ သြစတြေးလျအသင်းက ချန်ပီယံဆုကို (၄)ကြိမ်အထိ ရယူကာ ဒုတိယအအောင်မြင်ဆုံးအဖြစ် ရပ်တည်နေသလို သူတို့ရဲ့နောက်မှာ ချန်ပီယံဆုကို (၂)ကြိမ်ရရှိထားတဲ့ မြန်မာအသင်းက တတိယအအောင်မြင်ဆုံးအသင်းအဖြစ် ရပ်တည်နေခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာအသင်းဟာ ပြိုင်ပွဲရဲ့ တတိယအအောင်မြင်ဆုံးအသင်းဖြစ်သလို ချန်ပီယံဆုကို (၂)ကြိမ်ဆက်တိုက်ရယူနိုင်ခဲ့တဲ့ တစ်သင်းထဲသော အသင်းအဖြစ် မှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ပြိုင်ပွဲရဲ့ အစောပိုင်းကာလတွေမှာ အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိခဲ့ပြီး မှတ်တမ်းကောင်းတွေ စိုက်ထူနိုင်ခဲ့ပေမယ့် ကစားသမားမျိုးဆက် ရှားပါးမှုပြဿနာတွေကြောင့် အောင်မြင်မှုတွေရယူနိုင်ဖို့ အလှမ်းဝေးနေခဲ့တဲ့ အသင်းတစ်သင်းပါပဲ။ နောက်ဆုံးအကြိမ် ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၅ ပြိုင်ပွဲနောက်ပိုင်း နှစ်ပေါင်း (၁၃)နှစ်ကြာ ဗိုလ်လုပွဲအဆင့်နဲ့ အလှမ်းဝေးနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း (၁၂)နှစ်တာကာလအတွင်း ကျင်းပခဲ့တဲ့ ပြိုင်ပွဲ (၁၂)ကြိမ်မှာ မြန်မာအသင်း အုပ်စုအဆင့်ကို (၄)ကြိမ်သာ ကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့အထိ စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းတွေက နိမ့်ကျနေခဲ့တယ်။ ယူ-၂၀ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲအထိ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့် ရရှိခဲ့ပြီး မြန်မာဘောလုံးလောကရဲ့ အကောင်းဆုံးရွှေရောင်မျိုးဆက်လို့ တင်စားခဲ့ကြတဲ့ ကစားသမားတွေ လက်ထက်မှာတောင် နောက်ဆုံးဗိုလ်လုပွဲကို မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံက အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပနေတဲ့ ၂၀၁၈ အာဆီယံယူ-၁၉ ချန်ပီယံရှစ်ပြိုင်ပွဲမှာတော့ တတိယအကြိမ်မြောက် ချန်ပီယံအိပ်မက်ကို အသက်သွင်းဖို့ ခြေတစ်လှမ်းအလိုကို မြန်မာလူငယ်အသင်း ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမြန်မာယူ-၁၉ အသင်းကို ငွေခေတ်လက်ရွေးစင်ကစားသမားဟောင်း ဦးမျိုးလှိုင်ဝင်းက နည်းပြချုပ်အဖြစ် တာဝန်ယူကိုင်တွယ်နေပြီး (၁၃)နှစ်ကြာ ဝေးကွာနေခဲ့တဲ့ နောက်ဆုံးဗိုလ်လုပွဲကို တစ်ကျော့ပြန် တက်ရောက်နိုင်အောင် စွမ်းဆောင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာအသင်းဟာ အုပ်စု (ခ)မှာ မလေးရှား၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ အရှေ့တီမော၊ ဘရူနိုင်းအသင်းတွေနဲ့ တစ်အုပ်စုတည်း ကျရောက်ခဲ့လို့ နောက်တစ်ဆင့်ကို အခက်အခဲမရှိ တက်ရောက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ တွက်ဆခဲ့ပေမယ့် ပုံစံကောင်းပြသနိုင်ဖို့ ရုန်းကန်ခဲ့ရပါတယ်။ အရှေ့တီမောနဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ အုပ်စုအဖွင့်ပွဲစဉ်မှာ သရေကျခဲ့လို့ နောက်တစ်ဆင့်တက်ရောက်ဖို့ ရုန်းကန်ခဲ့ရပြီး မလေးရှားကို အုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲစဉ်မှာ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပေမယ့် အုပ်စုဒုတိယနေရာအတွက် အဓိကပြိုင်ဘက် အရှေ့တီမောက ကမ္ဘောဒီးယားကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့လို့ နောက်တစ်ဆင့်ကို တက်ရောက်နိုင်ခဲ့တာပါ။ အုပ်စုပွဲစဉ်တွေမှာ ရလဒ်ကောင်းတွေ မရရှိခဲ့ပေမယ့် သွင်းဂိုး (၁၃)ဂိုးအထိ ရရှိခဲ့ပြီး တစ်ပွဲပျှမ်းမျှ (၃.၂၅)ဂိုးအထိ သွင်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့ မြန်မာအသင်းရဲ့ တိုက်စစ်ပိုင်းကတော့ အကောင်းဆုံးအနေအထားတစ်ရပ်မှာ ရှိနေခဲ့တယ်။
ဆီမီးဖိုင်နယ်အဆင့်မှာ ဒေသတွင်းထိပ်သီး ထိုင်းအသင်းနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပေမယ့် အသင်းရဲ့ အားနည်းချက်တွေကို အကောင်းဆုံး ပြုပြင်နိုင်ခဲ့ပြီး ဂိုးသွင်းဘုရင်ဆု ရရှိဖို့ ရေပန်းစားနေတဲ့ လူငယ်တိုက်စစ်မှူး ဝင်းနိုင်ထွန်းရဲ့ နောက်ကျအနိုင်ဂိုးနဲ့ ဗိုလ်လုပွဲအဆင့်ကို တက်ရောက်နိုင်ခဲ့တယ်။ မြန်မာအသင်းဟာ လက်ရွေးစင်အဆင့်မှာကော သက်တမ်းအလိုက်အဆင့်တွေရဲ့ အဓိကပြိုင်ပွဲတွေမှာ ထိုင်းအသင်းကို ကျော်ဖြတ်ဖို့ ခက်ခဲလေ့ရှိပြီး အသင်းတိုင်းလိုလို အရှုံးပေးနေရတဲ့ မှတ်တမ်းဆိုးတစ်ခုကို ချေဖျက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာအသင်းဟာ ဗိုလ်လုပွဲအဖြစ် အိမ်ရှင်အင်ဒိုနီးရှားအသင်းကို ပယ်နယ်တီအဆုံးအဖြတ်နဲ့ ကျော်ဖြတ်လာတဲ့ အုပ်စုတွင်းပြိုင်ဘက် မလေးရှားအသင်းနဲ့ ရင်ဆိုင်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်းအသင်းကို အနိုင်ကစားနိုင်ခဲ့တဲ့ ပွဲကခြေစွမ်းကို ဆက်ထိန်းနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ မြန်မာအသင်း နှစ်ပေါင်း (၁၃)နှစ်အကြာ စောင့်ဆိုင်းခဲ့ရတဲ့ တတိယအကြိမ်မြောက် ချန်ပီယံဆုဖလားကို ရယူနိုင်မှာပါ။ မလေးရှားအသင်းကလည်း ပြိုင်ပွဲသမိုင်းတစ်လျှောက် ဗိုလ်လုပွဲတက်ခဲ့တဲ့ (၅)ကြိမ်စလုံး ဒုတိယနေရာနဲ့ပဲ ကျေနပ်ခဲ့ရတဲ့ မှတ်တမ်းဆိုးကို ချေဖျက်နိုင်ဖို့ အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်လာမှာဖြစ်လို့ မြန်မာအသင်း အကောင်းဆုံး စွမ်းဆောင်ပြနိုင်မှ ချန်ပီယံဆုဖလားကို မျှော်မှန်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာအသင်းဟာ ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တဲ့ (၂)ကြိမ်စလုံး မလေးရှားအသင်းကို အနိုင်ရ ဗိုလ်စွဲခဲ့တာဖြစ်လို့ အခုတစ်ကြိမ်မှာလည်း ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုမှာ အသာရနေတဲ့ မှတ်တမ်းကောင်းကို ဆက်ထိန်းပြီး ချန်ပီယံဆုဖလားကို အရယူကာ အောင်မြင်မှုတွေ ငတ်မွတ်နေတဲ့ မြန်မာဘောလုံးချစ်ပရိသတ်တွေကို ပျော်ရွှင်စေနိုင်မလားဆိုတာကတော့ . . .
၂၀၁၈ အာဆီယံယူ-၁၉ ချန်ပီယံရှစ် ဗိုလ်လုပွဲ
မြန်မာ – မလေးရှား (စနေည ၆း၃၀ နာရီ)
Photo:aseanfootball.org, FoxSportsAsia, FA Malaysia Twitter
မွနျမာဘောလုံးပရိသတျတှရေဲ့ ပြျောရှငျမှုအတှကျ အကောငျးဆုံးစှမျးဆောငျပွရမယျ့ ယူ-၁၉ အသငျး
အာဆီယံယူ-၁၉ ပွိုငျပှဲကို ၂၀၀၂ ခုနှဈက စတငျကငျြးပခဲ့ပွီး ၂၀၀၄ ခုနှဈက လှဲလို့ နှဈစဉျမပွတျ ကငျြးပခဲ့တဲ့ အာဆီယံဒသေတှငျး သကျတမျးအလိုကျ လူငယျပွိုငျပှဲတဈခုလညျးဖွဈပါတယျ။ ကငျြးပပွီးစီးခဲ့တဲ့ (၁၅)ကွိမျမှာ ဒသေတှငျးထိပျသီး ထိုငျးအသငျးက ခနျြပီယံဆုကို (၅)ကွိမျအထိ ရယူနိုငျခဲ့ပွီး ပွိုငျပှဲရဲ့ အအောငျမွငျဆုံးအသငျးအဖွဈ မှတျတမျးဝငျထားတာဖွဈပါတယျ။ ထိုငျးအသငျးရဲ့ နောကျမှာတော့ သွစတွေးလအြသငျးက ခနျြပီယံဆုကို (၄)ကွိမျအထိ ရယူကာ ဒုတိယအအောငျမွငျဆုံးအဖွဈ ရပျတညျနသေလို သူတို့ရဲ့နောကျမှာ ခနျြပီယံဆုကို (၂)ကွိမျရရှိထားတဲ့ မွနျမာအသငျးက တတိယအအောငျမွငျဆုံးအသငျးအဖွဈ ရပျတညျနခေဲ့ပါတယျ။ မွနျမာအသငျးဟာ ပွိုငျပှဲရဲ့ တတိယအအောငျမွငျဆုံးအသငျးဖွဈသလို ခနျြပီယံဆုကို (၂)ကွိမျဆကျတိုကျရယူနိုငျခဲ့တဲ့ တဈသငျးထဲသော အသငျးအဖွဈ မှတျတမျးတငျထားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ပွိုငျပှဲရဲ့ အစောပိုငျးကာလတှမှော အောငျမွငျမှုတှေ ရရှိခဲ့ပွီး မှတျတမျးကောငျးတှေ စိုကျထူနိုငျခဲ့ပမေယျ့ ကစားသမားမြိုးဆကျ ရှားပါးမှုပွဿနာတှကွေောငျ့ အောငျမွငျမှုတှရေယူနိုငျဖို့ အလှမျးဝေးနခေဲ့တဲ့ အသငျးတဈသငျးပါပဲ။ နောကျဆုံးအကွိမျ ခနျြပီယံဖွဈခဲ့တဲ့ ၂၀၀၅ ပွိုငျပှဲနောကျပိုငျး နှဈပေါငျး (၁၃)နှဈကွာ ဗိုလျလုပှဲအဆငျ့နဲ့ အလှမျးဝေးနခေဲ့တာဖွဈပါတယျ။ နောကျပိုငျး (၁၂)နှဈတာကာလအတှငျး ကငျြးပခဲ့တဲ့ ပွိုငျပှဲ (၁၂)ကွိမျမှာ မွနျမာအသငျး အုပျစုအဆငျ့ကို (၄)ကွိမျသာ ကြျောဖွတျနိုငျခဲ့အထိ စှမျးဆောငျရညျပိုငျးတှကေ နိမျ့ကနြခေဲ့တယျ။ ယူ-၂၀ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲအထိ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျခှငျ့ ရရှိခဲ့ပွီး မွနျမာဘောလုံးလောကရဲ့ အကောငျးဆုံးရှရေောငျမြိုးဆကျလို့ တငျစားခဲ့ကွတဲ့ ကစားသမားတှေ လကျထကျမှာတောငျ နောကျဆုံးဗိုလျလုပှဲကို မတကျရောကျနိုငျခဲ့ပါဘူး။
အငျဒိုနီးရှားနိုငျငံက အိမျရှငျအဖွဈ လကျခံကငျြးပနတေဲ့ ၂၀၁၈ အာဆီယံယူ-၁၉ ခနျြပီယံရှဈပွိုငျပှဲမှာတော့ တတိယအကွိမျမွောကျ ခနျြပီယံအိပျမကျကို အသကျသှငျးဖို့ ခွတေဈလှမျးအလိုကို မွနျမာလူငယျအသငျး ရောကျရှိလာခဲ့ပွီဖွဈပါတယျ။ လကျရှိမွနျမာယူ-၁၉ အသငျးကို ငှခေတျေလကျရှေးစငျကစားသမားဟောငျး ဦးမြိုးလှိုငျဝငျးက နညျးပွခြုပျအဖွဈ တာဝနျယူကိုငျတှယျနပွေီး (၁၃)နှဈကွာ ဝေးကှာနခေဲ့တဲ့ နောကျဆုံးဗိုလျလုပှဲကို တဈကြော့ပွနျ တကျရောကျနိုငျအောငျ စှမျးဆောငျပေးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ မွနျမာအသငျးဟာ အုပျစု (ခ)မှာ မလေးရှား၊ ကမ်ဘောဒီးယား၊ အရှတေီ့မော၊ ဘရူနိုငျးအသငျးတှနေဲ့ တဈအုပျစုတညျး ကရြောကျခဲ့လို့ နောကျတဈဆငျ့ကို အခကျအခဲမရှိ တကျရောကျနိုငျလိမျ့မယျလို့ တှကျဆခဲ့ပမေယျ့ ပုံစံကောငျးပွသနိုငျဖို့ ရုနျးကနျခဲ့ရပါတယျ။ အရှတေီ့မောနဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ အုပျစုအဖှငျ့ပှဲစဉျမှာ သရကေခြဲ့လို့ နောကျတဈဆငျ့တကျရောကျဖို့ ရုနျးကနျခဲ့ရပွီး မလေးရှားကို အုပျစုနောကျဆုံးပှဲစဉျမှာ ရှုံးနိမျ့ခဲ့ပမေယျ့ အုပျစုဒုတိယနရောအတှကျ အဓိကပွိုငျဘကျ အရှတေီ့မောက ကမ်ဘောဒီးယားကို ရှုံးနိမျ့ခဲ့လို့ နောကျတဈဆငျ့ကို တကျရောကျနိုငျခဲ့တာပါ။ အုပျစုပှဲစဉျတှမှော ရလဒျကောငျးတှေ မရရှိခဲ့ပမေယျ့ သှငျးဂိုး (၁၃)ဂိုးအထိ ရရှိခဲ့ပွီး တဈပှဲပြှမျးမြှ (၃.၂၅)ဂိုးအထိ သှငျးယူနိုငျခဲ့တဲ့ မွနျမာအသငျးရဲ့ တိုကျစဈပိုငျးကတော့ အကောငျးဆုံးအနအေထားတဈရပျမှာ ရှိနခေဲ့တယျ။
ဆီမီးဖျိုငျနယျအဆငျ့မှာ ဒသေတှငျးထိပျသီး ထိုငျးအသငျးနဲ့ ရငျဆိုငျခဲ့ရပမေယျ့ အသငျးရဲ့ အားနညျးခကျြတှကေို အကောငျးဆုံး ပွုပွငျနိုငျခဲ့ပွီး ဂိုးသှငျးဘုရငျဆု ရရှိဖို့ ရပေနျးစားနတေဲ့ လူငယျတိုကျစဈမှူး ဝငျးနိုငျထှနျးရဲ့ နောကျကအြနိုငျဂိုးနဲ့ ဗိုလျလုပှဲအဆငျ့ကို တကျရောကျနိုငျခဲ့တယျ။ မွနျမာအသငျးဟာ လကျရှေးစငျအဆငျ့မှာကော သကျတမျးအလိုကျအဆငျ့တှရေဲ့ အဓိကပွိုငျပှဲတှမှော ထိုငျးအသငျးကို ကြျောဖွတျဖို့ ခကျခဲလရှေိ့ပွီး အသငျးတိုငျးလိုလို အရှုံးပေးနရေတဲ့ မှတျတမျးဆိုးတဈခုကို ခဖြေကျြနိုငျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ မွနျမာအသငျးဟာ ဗိုလျလုပှဲအဖွဈ အိမျရှငျအငျဒိုနီးရှားအသငျးကို ပယျနယျတီအဆုံးအဖွတျနဲ့ ကြျောဖွတျလာတဲ့ အုပျစုတှငျးပွိုငျဘကျ မလေးရှားအသငျးနဲ့ ရငျဆိုငျသှားရမှာဖွဈပါတယျ။ ထိုငျးအသငျးကို အနိုငျကစားနိုငျခဲ့တဲ့ ပှဲကခွစှေမျးကို ဆကျထိနျးနိုငျခဲ့မယျဆိုရငျတော့ မွနျမာအသငျး နှဈပေါငျး (၁၃)နှဈအကွာ စောငျ့ဆိုငျးခဲ့ရတဲ့ တတိယအကွိမျမွောကျ ခနျြပီယံဆုဖလားကို ရယူနိုငျမှာပါ။ မလေးရှားအသငျးကလညျး ပွိုငျပှဲသမိုငျးတဈလြှောကျ ဗိုလျလုပှဲတကျခဲ့တဲ့ (၅)ကွိမျစလုံး ဒုတိယနရောနဲ့ပဲ ကနြေပျခဲ့ရတဲ့ မှတျတမျးဆိုးကို ခဖြေကျြနိုငျဖို့ အကောငျးဆုံးပွငျဆငျလာမှာဖွဈလို့ မွနျမာအသငျး အကောငျးဆုံး စှမျးဆောငျပွနိုငျမှ ခနျြပီယံဆုဖလားကို မြှျောမှနျးနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ မွနျမာအသငျးဟာ ခနျြပီယံဖွဈခဲ့တဲ့ (၂)ကွိမျစလုံး မလေးရှားအသငျးကို အနိုငျရ ဗိုလျစှဲခဲ့တာဖွဈလို့ အခုတဈကွိမျမှာလညျး ထိပျတိုကျတှဆေုံ့မှုမှာ အသာရနတေဲ့ မှတျတမျးကောငျးကို ဆကျထိနျးပွီး ခနျြပီယံဆုဖလားကို အရယူကာ အောငျမွငျမှုတှေ ငတျမှတျနတေဲ့ မွနျမာဘောလုံးခဈြပရိသတျတှကေို ပြျောရှငျစနေိုငျမလားဆိုတာကတော့ . . .
၂၀၁၈ အာဆီယံယူ-၁၉ ခနျြပီယံရှဈ ဗိုလျလုပှဲ
မွနျမာ – မလေးရှား (စနညေ ၆း၃၀ နာရီ)